सडक यातायात हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७८, शनिबार ०९:४७
साविकको सहजपुर,निगाली, खैरला गाउँविकास समितिलाई मिलाएर चुरे गाउँपालिका बनेको हो ।
सो पालिकामा एमालेबाट धनबहादुर रोक्कामगर अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन । उनले २०४९ सालको स्थानीय चुनावमा निगाली गाविसको वडा अध्यक्ष, २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा सोही गाविसको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव पनि सगालेका छन् ।
प्रस्तुत छ ५६ वर्षीय अध्यक्ष रोकामगरसंग चुरे गाउँपालिकाको विकास, निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानीको सारसंक्षेप ।
जनतामाझ चुनावी प्रतिवद्धताहरु के के गर्नुभएको थियो ? के के पुरा भए ?
पहाडी क्षेत्र, भौगोलिक विकटताले सबै ठाउँमा बाटोघाटोको सहजता थिएन, ठाउँठाउँका फरकफरक समस्या थिए, हामीले जुन ठाउँमा जस्तो समस्या छ त्यस्तै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौं ।
कतै खानेपानीको समस्या थियो, कतै विद्युत्को समस्या, कतै बाटोघाटोको समस्या थिए । ती समस्या सामाधानमा हामी लागेका छौ । धेरै प्रतिबद्धताहरु त पूरा गरेका छौ, केही प्रतिवद्धताहरु बजेटको अभाव र समय लाग्ने भएकाले ती योजना पूरा गर्ने क्रममै छौ ।
यो वीचमा खास गरेर सम्झनयोग्य काम के भए ?
भौगोलिकरुपमा विकट गाउँपालिका भएकाले धेरै ठाउँमा बाटोकै समस्या थियो । त्यसैगरी जनतालाई सहजै सेवा दिन पालिका र वडा भवन बनाउनुपर्ने पनि आवश्यक थियो । खैरालामा मोटरबाटो सञ्चालन गर्ने धोको पूरा भएको छ । गाउँपालिका र वडाका भवन बनाउन सफल भएका छौ । खानेपानीको स्रोत नभएका ठाउँमा पनि लिफ्टिङ खानेपानीको सञ्चालन गरेर खानेपानी सेवा दिएका छौ ।
हामीले चाहेजति गर्न नसकेपनि गाउँपालिकाको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जनताका न्युनतम आवश्यकताहरुमा काम गर्न सकेका छौ भन्ने हाम्रो समिक्षा छ ।
तपाईको पालिकालाई समृद्ध बनाउने अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना के के ल्याउनु भएको छ ?
पालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि सडकका ट्रयाकमात्र खोलेका छौ । ती सडकको स्तरउन्नती गरेर पक्की गर्नुपर्छ र सबैठाउँका जनताले सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो ।
सडक नपुगेको ठाउँका जनता सामाजिक आर्थिकरुपले पछाडि पर्नुका साथै शिक्षा स्वास्थ्यमा समेत सहजै पहुँचका लागि पनि सडक आवश्यक छ ।
विद्युतको समस्या थियो । हामी आएपछि धेरै ठाउँमा विद्युत्को समस्या सामाधान भएको छ भने बालुवागडा, खैराला लगायतका क्षेत्रमा अझै विद्युत्का काम भइरहेका छन् ।
सङघ, प्रदेश र पालिकाको बजेटमा बजेटको आकार, योजना अनुसार दीर्घकालिन र अल्पकालिन योजना छन् । भौतिक विकास मात्र नभएर यहाँको पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सामाजिक विकासमा पनि पालिकाले योजना बनाएर काम गरेको छ ।
वडा नम्बर, १, ३ र ५ वडाका निगाली, घरखेडा,थली क्षेत्रमा प्रशस्त फलफुल तथा तरकारी खेती हुने गरेको छ । ती वडाका साथै फलफुल तथा तरकारी खेतीबाट स्थानीयको आयआर्जन राम्रै भएका अन्य वडामा समेत ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेका छौ ।
सहजपुरदेखि निगालीसम्म सडक पक्की गर्ने र कर्मचारी आवास गृह निमार्ण लगायत बहुवर्षीय ठूला योजना जुन सङ्घ,प्रदेश र पालिकाको संयुक्त सहयोगमा निर्माण हुने योजनालाई दीर्घकालिन योजना अन्र्तगत राखेका छौ ।
सुन्तला उत्पादनको लागि चुरे गाउँपालिकाले परिचय पाएको छ, सुन्तला खेती गर्ने किसानलाई के कस्तो अनुदान सहयोग गर्दै आउनु भएको छ ?
चुरे गाउँपालिकाको घरखेडा, थली, निगाली लगायतका क्षेत्रमा राम्रो सुन्तला खेती हुने गर्दछल । यहाँका किसानहरुले व्यवसायीक सुन्तला खेती गरेर उत्पादनलाई बाहिर पठाउने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सुन्तलामा कालो ढुसीको समस्या आएर उत्पादन घट्दै गएको किसानहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । हामीले त्यस विषयमा सम्वन्धित ठाउँमा विशेषज्ञताका लागि पहलगर्ने जमर्को गरेका छौ । साथै सुन्तलाको व्लक बनाएर सुन्तला खेतीलाई बढाउदै लैजानकालागि किसानलाई प्रेरित गर्ने योजना समेत बनाएका छौ।
विकासका कार्यमा प्रदेश र सङ्घ सरकारसंग के कस्ता समन्वय भएका छन् ?
विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसंग समन्वय राम्रै हुने गरेको छ । हाम्रो गाउँपालिकामा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट भनेजस्तो बजेट आएको छैन ।
यद्यपी ट्रयाक मात्र खोलेका सडकमा पनि छन् तिनको स्तरउन्नती, ग्राभेल सडक साथै पक्की सडकका लागि केही पालिकाको बजेट केही प्रदेशको बजेट र केही सङ्घको बजेटबाट काम हुने गरेको छ । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत प्रदेश सरकार र सङघीय सरकारको सहयोग रहेको छ ।
२० किलोमिटर सहजपुर निगालीसम्म सडक पक्की बनाउने योजना समेत प्रदेश र सङ्घ सरकारसंगको सहयोगमा सञ्चालनमा छ ।
शुसासनका लागि खास काम के गर्नु भएको छ ?
गाउँपालिकाबाट हुने सबै गतिविधि पारदर्शी बनाउन जनतालाई सजहै छिटो छरितो सेवा दिन नागरिक बडापत्र राखेका छौ ।
सूचना र प्रविधिको जमाना सबैको हातहातमा मोवाइल र ईन्टरनेट छ ,गाउँपालिकाका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायत सूचनाहरु वेबसाईडमा राख्ने गरेका छौ । योजना छनौट, बजेट निर्माणका कामहरु नियम अनुसार गर्ने गरेका छौ ।
योजना कार्यान्वयन गर्दा नियम अनुसार उपभोक्ता समितिबाट हुने काम उपभोक्ता समिति र ठेक्काबाट हुने काम टेण्डर प्रकृयाबाट गर्ने गरेका छौ । स्थानीय सरकारको क्षेत्र अधिकार भित्र रहेर काम गरेका छौ ।
तपाईको पालिकाको आन्तरिक स्रोत र बजेटको अवस्था कस्तो छ ?
गतवर्ष पालिकाको आन्तरिक आम्दानी ५७ लाख थियो भने यो वर्ष झनै घट्ने सम्भावना छ । पालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत ढुंगा गिट्टी बालुवाको रोयल्टी हो । तर विवादका कारण अहिले टेण्डर पनि हुन सकेको छैन ।
त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा हामीले आन्तरिक आम्दानी अनुमानित ३५ लाख जति राखेका छौ । पालिकाको गत आर्थिक वर्षको बार्षिक बजेट ४३ करोड ३३ लाख थियो भने चालुआर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक बजेट ४३ करोड ७० लाख रहेको छ । वार्षिक खर्च ९० प्रतिशत सेरोफेरोमा हुने गरेको छ ।
तपाईको पालिकामा नागरिकले विकासमा कत्तिको चासो राख्छन् ? र के के कुराको माग गर्छन? कसरी ती माग पुरा गर्नुहुन्छ ?
आफ्नो ठाउँको विकासमा नागरिकले चासो राख्दछन् । तर जति चासो राख्दछन् त्यति नागरिक आफू उत्तरदायी बन्दैनन । सरकारको मुख ताक्ने बानी छ । पहिला पहिला जस्तो विकासको काममा जनश्रमदान अहिले नागरिकले गर्दैनन् ।
ठाउँ अनुसार र विकास अनुसार जनताका माग फरक फरक हुने गर्दछन् । बाटो नपुगेका ठाउँका नागरिकले बाटो बनाइदियोस भन्छन् । ग्राभेल नभएकाले ग्राभेलको माग गर्छन, ग्राभेल भएकाहरुले पक्की सडकको माग गर्छन । विद्यालय भवन निर्माण, लक्षित कार्यक्रम, सीपमुलक कार्यक्रम, खानेपानी ,विद्युत् लगायत जनतालाई आवश्यक योजनाको माग आउने गर्छ ।
सबैका सबैले राखेका माग पुरा गर्न त गारो हुन्छ । स्रोत र साधनले भ्याउने मागलाई प्राथमिकताका आधारमा पूरा गर्ने गरेका छौ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बनाउदा प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिएर बनाउनु भएको छ ?
पहाडी क्षेत्र हो अझै पनि यस पालिकाका सबै वडामा सहजै यातायातको पहुँच पुग्न सकेको छैन, कतिपय ठाउँमा त ट्रयाक नै खोल्न बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बनाउदा हामीले सहज यातायातलाई नै प्राथमिकता दिएका छौ । त्यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षा पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । साभार : गोरखापत्र दैनिक